Qaybta Qaybta - Ellicott Dredges
Waxaan si joogto ah u ilaalinaynaa qaybo badan oo kala jaad ah oo si fudud looga dhex heli karo agabkeena oo si toos ah loogu rari karo meel kasta oo adduunka ah. Waxaan nasiib u helnay inaan haysano xarun wax soo saar oo ku dhex yaal xeradeena. Tani waxay noo oggolaaneysaa inaan soo saarno qaybo tayo sare leh oo gudaha ah taasoo noo oggolaaneysa inaan la kulano dalabaadka sii kordhaya ee macaamiisheena.
Tusaale ahaan, xarunteenna wax soo saarka ayaa noo oggolaaneysa:
Soo saar qaybo ka mid ah guriga dhexdiisa si loo hubiyo tayada.
Kaydso qayb badan oo ka mid ah qaybaha wasakhda ah ee bakhaarkeena.
U bixi gaarsiin deg deg ah dhamaan qeybaha kala duwan ee aduunka.
Sii taageero joogto ah ka-iibinta ka dib xubnaha kooxda aqoonta u leh.
La xiriir Qeybta Qaybta
Cutterhead Dredge Qaybaha
Taxanaha 670HP Dragon® Dredge
Taxanaha 870HP Dragon® Dredge
Taxanaha 1270HP Dragon® Dredge
Taxanaha 2070HP Dragon® Dredge
Qaybaha Salaanka Lulida